HIM | Health in Myanmar » 2009 » June
Guiding Light" (HIV ကူးစက်ခံကလေးငယ်များ စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့)
'Guiding Light' ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းလေးကို 2007 December မှာ စေတနာရှင်လူငယ်(၆)ဦးနဲ့ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်..မိဘနှစ်ပါးစလုံး AIDS ရောဂါနဲ့ သေဆုံးသွားပြီး ခိုကိုးရာမဲ့ဖြစ်နေတဲ့ HIV ကူးစက်ခံကလေးငယ် များအတွက် လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးများကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ART ဆေးအား နိုင်ငံတကာပေါက်ဈေး၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် သုံးစွဲခွင့်ရ
မြန်မာနိုငငံမှ AIDS ဝေဒနာရှင်များသည် ၎င်းတို့၏ သက်တမ်းဆွဲဆန့်နိုင်ရန် ART (Antiretroviral) ဆေးသုံးစွဲရာ၌ နိုင်ငံတကာတွင် ၀ယ်ယူရသော ဈေးနှုန်း၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် သုံးစွဲခွင့်ရကြောင်း ဆေးဝါးတင်သွင်း၍ လက်ကားဖြန့်ဖြူး ရောင်းချသော လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးမှ True News သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာ နိုင်ငံတွင် HIV ပိုးရှိသူ (၂၄၀၀၀၀)ခန့်ရှိကြောင်း UNICEF သတင်းထုတ်ပြန်
မြန်မာ နိုင်ငံတွင် လက်ရှိ အချိန်၌ HIV ဗိုင်းရပ်(စ်) ရောဂါ ပိုးရှိသူ ပေါင်း (၂၄၀၀၀၀)ခန့် ကုလသမဂ္ဂ ကလေးများ ရန်ပုံငွေ အဖွဲ့ (UNICEF) ၏ တရားဝင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မိသားစုစီမံကိန်း၊ မိခင်ကျန်းမာရေး၊ လူထုကျန်းမာရေး၊ လူငယ်ကျန်းမာရေး၊ HIV နှင့် လိင်မှတဆင့် ကူးစက်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး ဆောင်ရွက်နေသော Marie Stopes International Myanmar ၏မှတ်တမ်းအရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရေးပါသော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
Earlier treatment is better treatment
You can't do better thanaclinical trial in Haiti. The [him] moderator hopes that WHO changes its guidelines SOON. … Overnight there are many more people in Myanmar in need of treatment.
ကျောင်းတွင်းပြင်ပ လူငယ်များတွင် HIV/AIDS သိရှိနားလည်မှု စစ်တမ်းပြုလုပ်
ကျောင်းပြင်ပ လူငယ်များတွင် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ၊ အေအိုင်ဒီအက်စ် သိရှိနားလည်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပထမဆုံးအကြိမ် စစ်တမ်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
အခြေခံပညာကျောင်းအားလုံး၌ ကျောင်းကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းသုံးရပ် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်
ယခု ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ပညာသင် နှစ်တွင် အခြေခံပညာကျောင်းအား လုံး၌ ကျောင်းကျန်းမာရေးလုပ်ငန်း စဉ် ကိုးခုရှိသည့်အနက် အစားအစာ အန္တရာယ်ကင်းဝေးရေးလုပ်ငန်း၊ မူး ယစ်ဆေးဝါး အန္တရာယ်ကြိုတင်ကာ ကွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ဆယ်ကျော် သက် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်း သုံးခုကို အဓိက ဦးစားပေးဆောင် ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန် တိုင်းမိခင်ကလေးနှင့်ကျောင်းကျန်းမာ ရေးတာဝန်ခံဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာ ခင်စောရီက ပြောကြားပါသည်။
အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီစစ်ဆေးမှုရလဒ် နယ်မြို့အချို့ရှိ ဓာတ်ခွဲခန်းများကြား ကွဲလွဲမှုရှိ
၂၀၀၈ ခုနှစ် ခုခံအားကျဆင်း မှုကူးစက်ရောဂါ အမြဲမပြတ်စူးစမ်း လေ့လာမှုအရ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီစစ်ဆေး မှုကို ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့အပါ အ၀င် နယ်မြို့ ၂၅ မြို့၌ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ တွင် နယ်မြို့များရှိ ဓာတ်ခွဲခန်း ၂၀ နှင့် ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့တို့ရှိ အကိုးအကား ဓာတ်ခွဲခန်းများကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်များ အရ သိရသည်။
လားရှိုးနှင့် မန္တလေးတွင် HIV ဝေဒနာရှင် အများဆုံးရှိနေ
လားရှိုးနှင့်မန္တလေးမြို့များသည် HIV ဝေဒနာ ခံစားနေရသည့် ပြည့်တန်ဆာ အများဆုံး လုပ်ကိုင်ရာ နေရာဖြစ်သည်ဟု ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ကြောင်း အပတ်စဉ်ထုတ် ပြည်တွင်း ဂျာနယ်တစ်စောင်ဖြစ်သည့် Weekly Eleven တွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။
AIDS ဗိုင်းရပ်စ်သည် ဦးနှောက်အား နည်းလမ်းနှစ်သွယ်ဖြင့်တိုက်ခိုက်
AIDS ဗိုင်းရပ်စ်သည် ဝေဒနာရှင်၏ ဦးနှောက်ကို နည်းလမ်းနှစ်မျိုးဖြင့်ဖျက်ဆီးသည်။ ၎င်းသည် ဦးနှောက်ကလပ်စည်းကို သေစေရုံသာမက ကလပ်စည်းသစ်ဖြစ်ပေါ်မှုကိုလည်း တားဆီးနိုင်သည်ဟု အမေရိကန်သုတေသနဌာနမှ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
အိန္နိယတွင် HIV ပိုးရှိသူ 5.7 သန်း ရှိလေသည်။ ယင်းအနက် သုံးပုံတစ်ပုံသည် အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၂၉ နှစ်အရွယ်တွင်းမှဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စသည် ယဉ်ကျေးမှုအခြေခံ သဘောတရားများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အခြေအတင် ဆွေးနွေးရမည့်ကိစ္စမဟုတ်ပါ။ လူ့အသက်များကို ကယ်တင်ရမည့်အခြေခံ ကိစ္စဖြစ်သည်ဟု AIDS ဌာနညွှန်ကြားရေးမှုး ဆူဂျာသာရောင်းကပြောသည်။
UNODC Myanmar Country Plan
In return for sharing advertising revenue, one Dr Pkhakadze of UNODC Myanmar has posted on Docstoc on the web the UNODC Myanmar Country Plan for 2009 – 2010. Now you can download it here.